Mikasa Tsy Hanome Sakafo Atoandro Ho An’ny Mpianatra Tsy Manana Karampanondro ny Governemantan’i India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2017 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, русский, 繁體中文, Ελληνικά, English
Sakafo atoandro eny amin'ny sekolim-panjakana ao India. Sary avy amin'ny Flickr, Trinity Care Foundation. CC BY-NC-ND 2.0
Amin'ny fiandohan'ny fahavaratra [ilabolantany avaratra], hanomboka hitaky amin'ireo ankizy mpianatra mahery ny 100 tapitrisa hampiseho ny Aadhaar (karampanondron’ izy ireo) ny governemanta Indiana vao mahazo mangataka ny sakafo atoandron'izy ireo.
Iray amin'ireo rafi-pikarakarakana fanondroana biometrika lehibe indrindra manerana izao tontolo ny Aadhaar. Tamin'ny volana lasa teo, 99 isanjaton'ny olondehibe ao India – izany hoe olona maherin'ny 1,1 miliara – no voasoratra anarana tamin'ny Aadhaar.
Tamin'ny fanambarana an-gazety tamin'ny 28 Febroary, nilaza ny Minisiteran'ny Fampandrosoana Ny Maha Olombelona ao India fa tsy hahazo ny sakafo atoandron'izy ireo maimaim-poana intsony ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana raha tsy mampiseho ny laharana karampanondro tarehimarika-12, Aadhaar azy ireo manokana. Manan-kery manomboka amin'ity lohataona ity ny politika vaovao manerana ny firenena, afa-tsy ao Jammu, Kashmir, Meghalaya, ary Assam.
Hoy ny voalazan'ny tatitra:
Noterena tsy maintsy natao manerana ny firenena ny #aadhaar mba hahazoan'ireo ankizy ny sakafo mafana maimaimpoana ao anatin'ny rafitra Sakafo Atoandro
Voalaza fa hisy fiantraikany amin'ireo mpianatra kilasy ambaratonga voalohany hatramin'ny kilasy ambaratonga fahavalo ny politika [fandaminana] vaovao. Rehefa avy mangataka ny karatra Aadhaar-n'izy ireo ny mpianatra, dia mahazo mampiasa “mari-panondroana hafa” mandra-pahazoana ny karatra.
Nanomboka tamin'ny taona 1995, nametraka ny rafitra sakafo atoandro saika ao amin'ny ankamaroan'ny fanjakana manerana ny firenena ny governemantam-pirenena Indiana mba hanampiana amin'ny fanatsarana ny fidirana an-tsekoly sy ny fanomezana sakafo ampy ho an'ireo ankizy tsy ampy sakafo avy amin'ny saranga ara-tsosialy ambany.
Tamin'ny taona 2015, namoaka didy ny fitsarana ao India fa tsy afaka manao ny karatra Aadhaar ho fepetra takiana hahazoana servisim-bahoaka ny governemanta. Andrasana amin'izao fotoana izao ny valin'ny fampiakarana fitsarana ambony ao amin'ny fitsarana ara-dalàmpanorenena ao amin'ny Fitsarana Tampony.
Nilaza ny governemanta fa ilaina ny politika vaovao mba hampadiodio ny “servisy [tolotra] ara-tsosialy”:
Ny fampiasana ny Aadhaar ho antontan-taratasy famantarana hahazoana tolotra, tombontsoa na fanampiana dia manamora ny dingana fizarana ataon'ny governemanta ary ahafahan'ireo mahazo tombontsoa amin'izany hisitraka amin'ny fomba mangarahara sy mivantana ny anjaran'izy ireo.
Tao amin'ny media sosialy, namaly tamim-pahatezerana manoloana ny politika vaovao ny mpitsikera. P. K. Prachi, ohatra, nanoratra tao amin'ny Facebook:
Mampiseho ny fanaovana ny sakafo atoandro ho miankina amin'ny laharan'ny Aadhaar fa ny famenoana ny lahatahiriny no mahamaika ny governemanta fa tsy ny famenoana ny kibo noana
Tao amin'ny Twitter, naneho hevitra ihany koa ireo mpitsikera:
Inona no mitranga? Tokony hamokatra karatra Aadhar alohan'ny hihinanan-tsakafo ve ny ankizy?
Nisioka i Anand Ranganathan, mpanao gazety hoe:
Ny sombim-baovao masiaka indrindra hovakianao androany. Mahafantatra ny olona fa tsy mamindra fo ny governemanta, saingy tsy misy indrafo ITY? Mahamenatra
Niantso ny politika vaovao ho “Orwellian” i James Wilson, milaza tena fa injeniera sivily ao Kerala, India.
Ka liana kokoa amin'ny lahatahiry sy ny fanarahamaso ny governemantantsika Orwellian fa tsy ny fiantohana ny sakafo atoandro ho an'ny ankizy sahirana..tena mampatahotra!
Mihoatra noho ny sakafo, eny, izay anarianao sakafo aman-taonina noho ny tsy fahampian'ny sompitra; hamindra vola mankany any amin'ny rain'izy ireo hisotroana toaka ianao!
Somary mankaloiloy ny fomba fanahian'ny governemantra loatra ny “fitiliana” ny olom-pireneny. Saingy tsy ho faty ny fahazarana taloha .. (ry) Na?
Dipanjan Saha nanoratra tao amin'ny Facebook:
Fanapahan-kevitra ara-politika masiaka loatra noraisin'ity governemanta ity ny fampifandraisana ny sakafo atoandro amin'ny karatra Aadhar .
Ny sasany kosa, na izany aza, niaro ny governemanta. Mpisera Twitter “Don Toxique” nilaza fa ilaina mba “hanentsenana ny fantsona vaky” ny fepetra henjana.
@jamewils ny Aadhar dia natao ho fizarana fitaovana sy tolotra ilaina ho an'ny BPL ary hanentsenana ny vaky amin'izany. Izany no fahalalahana tian'izy ireo
Supriya Sharma nanoratra tao amin'ny Scroll.in:
Amin'ny fanoherana ny fanapahan-kevitry ny governemanta Indiana, namoaka fanambarana ahitana izao manaraka izao ireo mpanao fanentanana avy amin'ny “Right to Food (Zo Hisakafo)”:
Ny fanentanana zo hisakafo dia manohitra tanteraka ny fihetsiky ny fanjakana izay manery ny hananan’ ny ankizy [ny laharana] Aadhaar ao anatin'ny rafitra sakafo atoandro eny amin'ny sekolim-panjakana. Tsinontsinona izany fa fikasana hanery ny olona hanoratra ny anaran’ ny zanak'izy ireo amin'ny Aadhaar.
Zo lehibe ho an'ny ankizy Indiana ny sakafo any an-tsekoly, tsy maintsy atao araka ny lalàna sy ny didin'ny Fitsarana Tampony sy ny Lalànan'ny Firenena momba ny Sakafo koa. Mampiseho ireo fikarohana marobe fa nanampy betsaka tamin'ny fidirana an-tsekoly, ny fisakafoanana tsara ho an'ny ankizy ary fianarana mahomby kokoa ny rafitra sakafo atoandro ao India. Manampy amin'ny fandravana ny hantsana ara-piarahamonina ao an-dakilasy ihany koa ny sakafo atoandro amin'ny alalan'ny fanazarana ireo ankizy avy amin'ny saranga isan-karazany amin'ny fifampizarana sakafo
Tsy tokony misy fepetra terena ampiharina amin'ny ankizy Indiana amin'ity zo lehibe ity. Tsy misy dikany ny fanerena ny fananana Aadhaar amin'ny sakafo atoandro, ary mety hanakorontana fa tsy hanampy ity programa lehibe ity. Fanampin'izany, fanitsakitsahana ny didin'ny Fitsarana Tampony izany fepetra izany.
Tarihan'ny Praiminisitra Narendra Modi, imbetsaka niezaka hametraka laharana Aadhaar teny amin'ny sekolim-panjakana, liseam-panjakana sy ny fandaharana isan-karazany vatsian'ny fanjakana ara-bola ny fanjakana Indiana. Na dia eo aza ny fanoheran'ny fitsarana, manohy ny politikany ny governematan'i Modi ary mifandona amin'ny didin'ny fitsarana.